Text Effect - Photoshop ဖြင့်စာလုံးဒီဇိုင်းများ ဖန်တီးခြင်း ~ မောင်မောင်သွင်
Kee Kee From Ebook
G-talk and Gmail
ဒီနေ့တော့ Photoshop နဲ့ စာလုံး Design လေးဖန်းတီးပုံကို photoshop အခြေခံလေးတွေ လိုချင်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။ သူငယ်ချင်းတွေကလည်း ခဏခဏနပူနစာ တိုက်နေတာနဲ့ မသိသေးတဲ့ သူများနဲ့ အဝေးကသူငယ်ချင်းတွေအတွက် ဒီနေ့ဒီပိုစ့်လေး ကိုတင်လိုက်ရပါတယ်.. လုပ်ပုံလုပ်နည်းကတော့ သိပ်မခက်ပါဘူး..။ အသေးစိတ်ရှင်းပြထားလို့ ပုံတွေတော့ နည်းနည်းများတယ်..။ အပေါ်ကပုံလေးကို ဘယ်လိုဖန်တီးလဲဆိုတာ ကိုတင်ပြသွားပါမယ်..
အရင်ဆုံး Photoshop ရဲ့ File ကနေ New .. အဲဒီကနေ Photo စာရွက်တခုကို စယူပါမယ်..။ အောက်ကပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း နံပါတ်စဉ်တိုင်း နှိပ်သွားလိုက်ပါ..
အားလုံးပဲ လုပ်တတ်ကိုင်တတ်၍ အဆင်ပြေကြပါစေ..
Posted by မောင်မောင်သွင်
Labels: PhotoShop လေ့လာရန်
ငယ်စဉ်ကအစ ခင်မင်ခဲ့ရသော သူငယ်ချင်းများနဲ့ တစ်ချိန်က ရေဖြူမြို့ ကလိန်အောင်ရွာ မှ သူငယ်ချင်းများအား အစဉ်သတိရနေလျှက်ပါ...
ကိုယ်တိုင်အသုံးပြုရန်အတွက်နည်းပညာ BLOG များမှစုဆောင်းနေဆဲပါ....
နိုင်ငံသစ်ဆီ ဒို့ လှမ်းချီ
Photoshop စာအုပ်လေးတွေ စုမိထားတာလေးပေါ့ မူရင်းတင်ထားသူကို Credit ပေးပါတယ် .... အောက်က Read more>> ကိုနှိပ်ပြီး ၀င်ယူလိုက်ပါ....
photoshop cs5 မြန်မာလိုpdf စာအုပ်
photoshop cs5 မြန်မာလိုpdfစာအုပ် လေးပါ ကို ThanNain ရေကျနော်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် အရင်ကလည်း ကျွန်တော် cs2ကနေcs5ထိတင်ပေးဘူးပါတယ် ကဲအောက်မှာ...
မလိုအပ်တဲ့ Temporary Files တွေကို Click တစ်ချက်နဲ့ ရှင်းပစ်မယ်
မိမိတို့ ကွန်ပျူတာမှာ မလိုအပ်တဲ့ Temporary Files တွေကို Click တစ်ချက်ထဲနဲ့ Clean လုပ်ပေးတဲ့ Software အလန်းလေးပါ... TFC.exe ဖိုင်...
Driver Navigator 3.4.4.34003 + Patch (10Mb)
Driver Navigator ကဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုတော့သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ကွန်ပြူတာ system ထဲမှာရှိနေတဲ့ broken device တွေရဲ့ drivers တွေကိုလွယ်ကူရှ...
Antivirus software websites ကွန်ပျူတာဗိုင်းရပ်စ်သတ် ဆော့ဖ်ဝဲ၀က်ဘ်ဆိုက်များ WWW.free.avg.com www.avast.com www.mcafee.com www.avir...
☆☆☆အင်တာနက်အတွင်း သီချင်း ရှာဖွေနည်း
မေလ 23, 2012 တွင် 4:34am မှာ soethein မှ တင်သွင်းခဲ့သည်။ ဖိုရမ်မှာ အတောင်းဆိုခံရဆုံး ဖိုရမ်ခွဲတစ်ခုကို ပြပါဆိုရင် သီချင်းတောင်းဆိုတဲ့...
Android/Tablet ကိုင်ဆောင်ကာ Framaroot အသုံးပြုသူများအတွက် 10 ရက်နေ့4 လပိုင်းက Update တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Anroid ဖုန်းများ Root လုပ်ရာမှာ န...
Programming နည်းပညာရဲ့ လုံးဝအခြေခံ ဖြစ်တဲ့ bat ဖိုင် ရေးနည်း
Programming နည်းပညာရဲ့ လုံးဝအခြေခံ ဖြစ်တဲ့ bat ဖိုင် ရေးနည်းလေးကို ဝါသနာပါသူများအတွက် မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ဒီ pdf ကို ဖတ်ဖို့ ကွန်ပြူတ...
ကွန်ပျူတာ အတွက် ဖောင့်စတိုင် အခုပေါင်း 1000 ကျော်နှီးပါ စုပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဖောင့်စတိုင် တော်တော်လေးစုံနေပါတယ် မင်္ဂလာဖိတ်စာ အလှူဖိ...
Gtalk ကနေ ပါဠိ- မြန်မာ - အင်္ဂလိပ်အဘိဓာန် အလွယ်တကူ ကြည့်ရှုနိုင်
အာဖ်အေသတင်းဌာနကနေ ယနေ့ညမှာ သားသားလေး ဖတ်မိတဲ့ သတင်းလေးပါ။ ဘုန်းဘုန်းတို့နှင့် ပါဠိစာပေကို လေ့လာလိုက်စားလိုသူတို့ အလွန်အသုံးဝင်တဲ့ ဖန်...
Maung Muang Thwin
နည်းပညာဘလော့များ မောင်(စွယ်စုံကျမ်း) ၀င်းကမ္ဘာ္ဘကျော် နည်းပညာမှတ်တမ်း နည်းပညာမြို့ တော် ဇော်မင်းသန်း ဆောဝဲ နှင့် နည်းပညာ စုဆည်းရာ အမျိုးကောင်းသား ဒီဇင်ဘာမောင်မောင် ကောင်လေးငယ် မုန်တိုင်း မိုးမြင့်ထက်နည်းပညာ ကော့သောင်းသား မောင်စေတနာ နေမင်းမောင်
Android Phone Firmwre
Android နှင့် ဆိုင်သော
မောင်မောင်သွင် နည်းပညာမှတ်စု. Powered by Blogger.
Copyright © 2011 မောင်မောင်သွင် | Powered by Blogger